विश्वभर भाइरल भइन् नेपाली बालिका समायरा, विदेशी मिडियामा पनि चर्चा ! [भिडियो सहित] – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/विश्वभर भाइरल भइन् नेपाली बालिका समायरा, विदेशी मिडियामा पनि चर्चा ! [भिडियो सहित]
काठमाडौँ – नेपालकी एक बालिका विश्वभर भाइरल भएकी छन्। टिकटकमा भाइरल भएकी बालिका समायरा थापा रहेकी छन्। टिकटकमा भाइरल भएपश्चात अहिले उनका भिडियोहरु फेसबुक, युट्युब सहित अन्य सामाजिक संजालमा पनि देखा परिरहेका छन्। समायरा थापा भाइरल भएको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले पनि प्राथमिकता दिएका छन्।
समायरालाई लिएर भारतबाट प्रकाशित हुने ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’ले एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। उसले समायराको अभिनय र हाउभाउले सबैलाई कायल बनाएको भनेर उल्लेख गरेको छ। नेपाली गीतहरुमा समायराले गरेको अभिनयको चर्चा गर्दै उसले इन्टरनेट सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु समायरालाई धेरै रुचाइरहेको दावी गरेको छ। समायरा थापाका कैयौं छोटा भिडियोहरु अहिले निकै भाइरल भइरहेका छन् । भाइरल भिडियोहरुमा उनको निक्कै नै प्रशंसा भइरहेको छ। भिडियो यहाँ छ
पाली गीतहरुमा समायराले गरेको अभिनयको चर्चा गर्दै उसले इन्टरनेट सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु समायरालाई धेरै रुचाइरहेको दावी गरेको छ। समायरा थापाका कैयौं छोटा भिडियोहरु अहिले निकै भाइरल भइरहेका छन् । भाइरल भिडियोहरुमा उनको निक्कै नै प्रशंसा भइरहेको छ। भिडियो यहाँ छ